ရေမြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
A hippopotamus in Kruger National Park, South Africa
ရေမြင်း (Hippopotamus) သည် ရေနေ ကြံ့မျိုးနွယ်ဝင် သတ္တဝါ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အမှန်တွင် ရေမြင်းဟူသောဝေါဟာရမှာ ဂရိဘာသာစကားဖြစ်သော ရေနှင့်မြင်းမှ ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေမြင်းများသည် မြစ်များနှင့်ကန်များအတွင်း နေထိုင်လေ့ရှိကြသည်။ နေ့ဘက်တွင် ရေအောက်၌ ခိုအောင်းနေထိုင်ကြပြီး ညအမှောင်ရောက်ချိန်တွင်မှ ရေပေါ်တက်ကာ မြစ်ကမ်းဘေး၊ ရေကန်ဘေးတွင် အစာရှာလေ့ရှိကြသည်။
ရေမြင်းများသည် သဘာဝအားဖြင့် ရန်လိုသောသတ္တဝါများဖြစ်ကြသည်။ အထီးများသည် တကောင်နှင့် တကောင် အမြဲလိုပင် ရန်လိုတတ်ကြပြီး ဒဏ်ရာအပြင်းအထန် ရသည်အထိ တိုက်ခိုက်တတ်ကြသည်။ ရေမြင်းများကို အာဖရိကတိုက်တွင် အများဆုံးတွေ့ရတတ်သည်။
အာဖရိကတိုက်၌သာ တွေ့ရ၍၊ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကုန်းသတ္တဝါထဲတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သောဆင်မှလွဲလျှင် ရေမြင်းသည် အကြီးဆုံးနှင့် အရုပ်အဆိုးဆုံးသတ္တဝါ ဖြစ်လေသည်။
ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်မှာ များသောအားဖြင့် ၁၂ ပေမှ ၁၄ ပေခန့်အထိ ရှိ၍ အရပ်မှာ ငါးပေခန့်မြင့်ရကား ဆင်ပေါက် ကလေးတမျှ ရှိ၏။ ယင်း၌ တိုတုတ်ကြံ့ခိုင်သော ခြေထောက် များ၊ ဝက်၏မျက်စိကဲ့သို့သော မျက်စိ၊ ပြား၍ ကျယ်ပြန့်သော နှာတံ၊ နှာရိုးကျယ်ဝန်း၍ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ပါးစပ် ရှိပြီးလျှင် ပါးစပ်ကြီးကို ဟလိုက်သောအခါ နီရဲသောတွင်းကြီး သဖွယ် ဖြစ်ပြီးလျှင် ကြီးလှသော သွားများနှင့် အစွယ်များကို အထင်းသား မြင်နိုင်လေသည်။ တစ်ကိုယ်လုံး တစ်လက်မ သာသာခန့်ရှိ ထူထဲသော အရေဖြင့် ဖုံးအုပ်ကာ အမွှေးအမှင် မရှိ၊ အမြီးဖျား၌သာ အမွေးအနည်းငယ် ရှိ၏။ ခြေထောက်တွင် ခြေချောင်းလေးချောင်း ရှိသည်။ ခြေထောက်သည် မြေပြင်၌ ပြားလိုက် တည်ရှိသည်။ အချို့ရေမြင်းတွင် နှာတံပေါ်၌ အမွေး ကြမ်း အနည်းငယ်ရှိပြီးလျှင် ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်း၊ နားရွက်နှင့် အမြီးတို့တွင်လည်း အမွေးများ ရှိတတ်သည်။ အရောင်မှာ အညိုရင့်ရောင်မှ ပြာလဲ့လဲ့အရောင်ထိ ရှိတတ်သည်။ ရေမြင်းမ များသည် အထီးထက် အတန်ငယ် ပြီးလျှင် အရောင်တွင်လည်း များသောအားဖြင့် ပို၍ ဖျော့တတ်သည်။
ဤမျှလောက် ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် ကြီးမားသော်လည်း ရေမြင်းသည် ရေကူးနှင့် ရေငုပ်ကျင်လည်၍ ရေ၌သာ အနေ များလေသည်။ ရေထဲတွင် ကိုယ်ကိုဖော့၍လည်း နေနိုင်၏။ အချိန်အတန်ကြာမျှ ရေထဲတွင် ငုပ်၍နေနိုင်သည်။ ရေပေါ်သို့ ပေါ်လာသောအခါတွင် ဝေလငါးကဲ့သို့ ရေများကို မှုတ်ထုတ် တတ်သည်။
ယင်းတို့သည် အကောင် ၂ဝ၊ ၂ဝ ခန့် စုရုံးကာ အအုပ် နှင့် အသင်းနှင့် နေတတ်ကြ၍ တစ်ခါတစ်ရံ မြစ်ကမ်းဘေးရှိ လယ်ယာ၊ ကိုင်းကျွန်းများသို့ တက်ကာ၊ ဂျုံပင်၊ စပါးပင်၊ ပြောင်းပင် စသော ကောက်ပဲသီးနှံများကို ဖျက်ဆီးတတ်ကြ ၏။ ကိုယ်အနေအထားသည် အဆင်မပြေသော်လည်း ကုန်း ပေါ်တွင် ခရီး ဝေးဝေး သွားနိုင်သည့်အပြင် အံ့ဩဖွယ်ကောင်း လောက်အောင် လျင်မြန်စွာလည်း ဒုန်းပြေးနိုင်သည်။
တိုင်းရင်းသားလူရိုင်းများသည် ရေမြင်းများကို လိုက်လံ သတ်ဖြတ်ပြီးလျှင် ယင်းတို့၏အသားကို စားသောက်ကြလေ သည်။ သွားများမှာမူ ဆင်စွယ်ထက်ပင် မာကျောလေသည်။ ရေမြင်း၏ အစာသည် ထူးထူးထွေထွေ မရှိလှ၊ မြစ် ကမ်းပါးတွင် ပေါက်ရောက်သော မြက်ပင်၊ ကိုင်းပင်၊ ရေညိ|ပင် များကိုသာ စားသောက်တတ်၏။ နေ့အခါ ရေထဲ၌နေ၍ ညဉ့် အခါများတွင် အစာရှာထွက် တတ်၏။ ရေထဲ၌ နေချိန်တွင် ယင်း၏နားရွက်နှင့် မျက်စိများကိုသာ ရေပေါ်တွင် ဖော်ထား လေ့ ရှိသည်။
သဘာဝအားဖြင့် လူကို လိုက်လံ ရန်မူတတ်ခြင်းမရှိသော် လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်သောအခါတွင် ရေအောက်မှ ငုပ်၍ လာပြီးလျှင် လူပါသောလှေကို မှောက်၍ပစ်တတ်လေ သည်။
ရေမြင်းပုကို အာဖရိကတိုက်အနောက် ဘက်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်နှင့် လိုက်ဗီးရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ တွင် တွေ့ရှိရ၍ ယင်းတို့သည် အလျား ခြောက်ပေခန့် ရှည်၍ နှစ်ပေခွဲခန့်သာ မြင့်လေသည်။
ရေမြင်းများသည် ကြောက်ရွံ့၍ စိတ်တုန်လှုပ်သည့်အခါ မျိုး၌ သူတို့၏ကိုယ်ပေါ်တွင် နီသောအရည် တစ်မျိုးကို တွေ့ရ တတ်၍ တချို့က ရေမြင်းများသည် ချွေးအစား သွေး ထွက်သည်ဟု အယူရှိကြ၏။ သို့သော် ထိုနီသော ချွေးရည် တစ်မျိုးသည် အမှန်အားဖြင့် သွေးနှင့် တစ်စုံတစ်ရာ ဆက် သွယ်ခြင်း မရှိချေ။
ရေမြင်းမတစ်ကောင်မှ တစ်ကြိမ်လျှင် သားတစ်ကောင် မွေးတတ်သည်။ ရေမြင်းကလေးကို မွေးပြီး၍ မကြာမီအတွင်း ၌ ရေသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလျှင် မိခင်၏ လည်တံပေါ်တွင် နေစေသည်။ ထိုသို့နေစေခြင်းသည် ရေမြင်းကလေး ရေမကူး မတတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ခြောက်နှစ်ကြားသည်အထိ ရေမြင်း သည် ကြီးထွားလာသည်။ ရေမြင်း၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်းသည် အနှစ်သုံးဆယ်ခန့် ဖြစ်သည်။
ရေမြင်းများကို ယခင်က အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် အများအပြား တွေ့ရှိရသော်လည်း ယခုအခါ၌မူ အာဖရိကအလယ် အပူပိုင်း ဒေသများ၌သာ တွေ့ရှိရတော့၏။
အမျိုးအနွယ်အားဖြင့် ရေမြင်းသည် တောဝက်အမျိုးအနွယ် ဖြစ်၍ ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်လျှင် ဝက်နှင့်၎င်း၊ မြင်းနှင့်၎င်း တူသည်။
နို့တိုက်သတ္တဝါများထဲတွင် ရေမြင်းထက်ပို၍ အရုပ်ဆိုး သောသတ္တဝါကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဆင်မှလွဲ၍ ယင်းထက် ပို၍ကြီးသော သတ္တဝါကိုသော်လည်းကောင်း မတွေ့ရချေ။
ရေမြင်းသည် ဟစ်ပိုပိုတေးဒီးမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ ပါဏဗေဒအလိုအရ သာမန်ရေမြင်းမျိုးစိတ်ကို ဟစ်ပိုပိုတေးမတ် အမ်ဖီးဗီးယပ်ဟု ခေါ်သည်။ ရေမြင်းပုကိုမူ ဟစ်ပိုပိုတေးမတ် လိုက်ဗီရီယန်ဆစ်ဟူ၍ ခေါ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ "Hippopotamus amphibius" (2017). IUCN Red List of Threatened Species 2017. IUCN. doi:10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T10103A18567364.en.
↑ ITIS on Hippopotamus amphibius။ Integrated Taxonomic Information System။
↑ The Best Ever Book of Questions & Answers.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေမြင်း&oldid=716507" မှ ရယူရန်
၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။